Comment แฟนฟุตซอลเมียนมา ก่อนเจอไทย นัดชิงแชมป์ฟุตซอลอาเซียน 2016 - ฟุตซอลไทย
Comment แฟนฟุตซอลเมียนมา ก่อนเจอไทย นัดชิงแชมป์ฟุตซอลอาเซียน 2016
Admin มกราคม 29, 2017 Comment แฟนฟุตซอล, ฟุตซอลไทย ไม่มีความเห็น
ဇော် နိုင် ထွန်း
ဆိုးတာက ကစားသမားတွေကထိုင်းနဲ့တွေ့ရင် စိတ်ဓာတ်သိမ်ငယ်သွားတာပဲ.. ဒီနေ့ထိုင်းအသင်းကစားကွက်က ဘာမှအဆင့်မရှိပါဘူး မြန်မာအသင်းကစားကွက်ကအများကြီးသာပါတယ်.. စိတ်ဓာတ်မြှင့်ပြီး ကစားဖို့ပဲလိုအပ်တာ.. ဖလားကလက်တကမ်းအလိုမှာပါ.. နိုင်အောင်ကစားပြီး မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးစေချင်ပါတယ်.. ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝထားပြီးကစားပါ… အိမ်အပြန်လမ်းမှာ အောင်ပန်းတွေနဲ့ကြိုဆိုနေကြမှာ မလွဲဧကန်ပါ
ที่แย่ก็คือ นักกีฬาเราเจอกับไทยเมื่อไร จิตใจก็แย่ลงไปด้วย..วันนี้ดูทีมไทยเล่น ระบบทักษะกันเล่นไม่มีอะไรพิเศษมาก ทีมเมียนมายังเหนือกว่าเยอะ..ที่จำเป็นก็คือทําจิตใจให้เต็ม100% แล้วสู้กับมันแค่นั้นเอง..อยากให้เล่นจนชนะแล้วเขียนบันทึกประวัติใหม่นะ..ต้องมีความมั่นใจแล้วเล่น..ต่อนกลับมา ด้วยชัยชนะก็จะไปรอต้อนรับกลับบ้านแน่นอน(ถ้าไม่ชนะก็No!ใช่มั้ย?555+)..
>>>Eain Lwan Thu : ဘယ်​တုန်းတုန်းကမှမနိုင်​ချင်​​နေပါ အခုနိုင်​ပြမယ်​ ကြည့်​ထား မြန်​မာကွမြန်​မာ…ไม่เคยชนะมาก็ช่าง ครั้งนี้เราจะชนะแน่ คอยดูเมียนมานะเมียนมา..
ယှဉ်ပြိုင်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်က အဓိကပါ—
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘောလုံးအသင်းတွေလည်း အရှုံးနဲ့မကင်းကြပါဘူးးးး
ရှုံးတဲ့အသင်းကလည်း အမြဲတမ်း ရှုံးမနေပါဘူးးးး
ထိုင်းနဲ့တွေ့ရင် ရှုံးမှာဘဲလို့ ဝိုင်းပြီးတွေးနေယင်တော့ အားပေးရာမကျဘဲ ထိုးချသလိုဖြစ်နေ— မပြိုင်ခင်က 50% ရှုံးနေပြီ—သည်လိုစိတ်ဓါတ်မွေးပေးပြီး အားပေးနေယင်တော့ အနိုင်ရလဒ်ကိုဘယ်တော့မှရလိမ့်မည်မဟုတ်တော့—
ทุกวันนี้ พวกทีมชื่อดังของโลกก็ หนีไม่พ้นกับกันพ่ายแพ้รอก…
เจอกับไทยเมื่อไร คิดแต่ว่าแพ้แน่มันก็เหมือนไม่ให้กำลังใจกันเลย เหมือนเขี่ยลงมากกว่า..ก็เท่ากับยังไม่ได้แข่งก็แพ้ไปแล้ว50%…ยังมีจิตใจแบบนั้นแล้ว ให้กำลังใจไปก็ไม่มีวันได้ชัยรอก…
သူတို့ လည်းအနိုင်လိုချင်လို့ ကန်နေတာပဲလေ
ထိုင်းက ခုနကကန်​တဲ့ မ​လေးနဲ့ပွဲ ပထမပိုင်းမှာ u20နဲ့ ကစားသွားတာ၊ ဒုတိယပိုင်းမှ လက်​​ရွေးစင်​အသင်းနဲ့ ကစားတာပါ၊ လက်​ရှိ ဖူဆယ်​ကမ္ဘာ့အဆင့်​ သတ်​မှတ်​ချက်​ 14 ပါ။ မြန်​မာက 97 ၊
ထိုင်းသာ အားကုန်​ထုတ်​ကစားရင်​ မြန်​မာကို ဂိုးပြတ်​နိုင်​မယ်​၊ ဒီလိုမှမဟုတ်​ပဲ ထိုင်းက ယူ၂၀နဲ့ ကန်​ခိုင်းရင်​ မြန်​မာအသင်း သ​ရေရလဒ်​​လောက်​​မျှော်​မှန်းနိုင်​မယ်​။
ไทยเล่นกับมาเลย์นี้ ครึ่งแรกเอาลงแค่ u20เอง.มาครึ่งหลัง เอาตัวจริงมาเล่น.ณ ขณะนี้การจัดอันดับฟุตซอลโลก อยู่ที่ 14(ไทยอยู่16แล้วนะ). เมียนมา 97.
ถ้าไทยเอาจริงขึ้นมา เมียนมาเละเป็นโจ๊กแน่. ถ้าไม่ ให้เตะกับ u20 อาจมีวังแค่เสมอ.
>>>Lagone Eainn အာ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး ထိုင်းသာတာမှန်တယ် မလေးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်တဲ့ပုံစံတပုံစံတည်းဆိုတာသိမယ်ထင့်ပါ့ok…ไม่ขนาดนั้น ไทยเหนือกว่าก็จริง กับมาเลย์ ไทยและเมียนมา เอาชนะแบบsameๆ น่าจะรู้นะok..
မကန်ခင်ထဲက တစ်ဖက်အသင်းကိုရှိန်ပြီး ကြောက်စိတ် စိုးရိမ်စိတ်အရမ်းမများကြပါနဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအသင်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် ပြိုင်ဘက်က အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်နေရင် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲပြီးအမြဲပိတ်ကစားနေကြတော့ ခြေစွမ်းရော ရလဒ်ပါ ၂ ခုလုံးရှုံးနေခဲ့ရတယ်
ก่อนลงแข่งอย่าไปเกรงกลัวให้มากนะ ทีมเมียนมาเรา เวลาเจอกับทีมใหญ่ทีมหนึ่งเมื่อไรกังวลมากจนเล่นไม่ออก รอไปตั้งรับกันก็เลย แพ้ทั้งจิตใจและทักษะ2อย่างไง..
Khaing Zin Thi Tun
ကိုယ်​တိုင်​ကျ ရပ်​ကွက်​က​ဘောလုံးပွဲ​တောင်​နိုင်​​အောင်​မကန်​နိုင်​ပဲ ​ဝေဖန်​​နေတဲ့လူ​တွေရှိတယ်
คนบางตัว ตัวเองแค่เล่นในหมู่บ้านอย่าง ไม่เคยชนะเลยแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์เขา
Aung Yan Paing
ဗေဒင်မမေးနဲ့ ထိုင်းဆိုရင်မြန်မာကမကစားရသေးဘူး ဖင်တုန်အောင်ကြောက်နေတာ ရှုံးမှာပါ
เมียนมาเราอย่ายอมแพ้นะเอาชัยชนะกลับมา ไม่อยากได้ยินคำว่าเจอกับไทยเมื่อไรก็แพ้ เอาชัยชนะที่ไทยนะ จะกําลังใจอยู่บนTV
Zar Mani Kyaw
ကိုင်းThaiကတော့ဒါBအသင်းတဲ့ Aက asiaအဆင့် asianမဟုတ်ပုတဲ့ ပြောထားပီcmtတွေမှာ Bကိုတော့နိုင်အောင်ချဗျာ
ต่อนไทยเขาว่าทีมB ทีมAเป็นระดับasia ไม่ใช่asianแล้ว เขาบอก เอาชนะให้ได้ทีมBเลย
နိုင်မှာပါ မြန်မာ fighting
Phoe Ta Lay Phoe
ထိုင်လဲခြေ နှစ်ချောင်း မြန်မာလဲ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ကန်တာ မြန်မာ နိုင်ကို နိင်ရမယ်
ไทยก็เตะด้วย2ขา เมียนมาก็มี2ขาเช่นกัน เราต้องชนะ
แปลโดยแอดมินเพจ : ไทยထိုင်း-เมียนมาမြန်မာ ข่าวသတင်း + คอมเม้นကွန်မန့်
By Admin สิงหาคม 2, 2018
By Admin มกราคม 28, 2017